Ọrụ Ọbá Akwụkwọ Na-enyere Gị Aka Inwe Ihe Suga nke Ọma »Mahadum Hodges
Nabata na Ọbá akwụkwọ na Mahadum Hodges
Iji nyere aka gboo mkpa gị, Terry P. McMahan Library na-enye ọtụtụ ụmụ akwụkwọ, ngalaba, ndị ọrụ na ndị okenye ụlọ ọrụ dị iche iche ọrụ na akụrụngwa.
Anyị na-eme ka ọ dịrị gị mfe inweta ozi ịchọrọ. Jikọọ na ọkachamara ọkachamara iji duzie gị nyocha, chọta ohere iji mụọ onwe gị ma ọ bụ otu, wee chọta akwụkwọ, edemede, na ihe ndị ọzọ iji kwado ahụmịhe agụmakwụkwọ gị. Kwụsị maka nleta! Anyị bịara ka anyị nyere aka.
Chọọ n'ọbá akwụkwọ maka ozi, edemede, akwụkwọ akụkọ, akwụkwọ, e-akwụkwọ, ihe nkiri, akwụkwọ e-gọọmentị, na ndị ọzọ site na nchịkọta anyị nke agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ pụrụ iche. Ọtụtụ ihe dị na ntanetị ozugbo. Imirikiti ihe anụ ahụ na-enyocha izu 3-4 ma megharịa ugboro abụọ. Mbinye ego ụlọ akụ na-eme ka anyị chọta ihe ndị ọzọ site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nchịkọta ọ bụla na mba ahụ.